चुनावमा अकल्पनिय झड्का लागेपछि ट्रम्पलाई के भयो ? – Daily NpNews
एक जनाको आँखाको नानीले चार जनालाई दृष्टि दिन सकिने प्रविधि बनाए डा. रुइतले
मुख्य पृष्ठ /समाचार/चुनावमा अकल्पनिय झड्का लागेपछि ट्रम्पलाई के भयो ?
अमेरिकी राष्टपतिय निर्वाचनामा जो बाइडेनसँग नराम्ररी पराजित भएका डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव आफैले जीतेको ठोकुवा गरेका छन् । भारी मतान्तरसहित आफूले चुनाव जितेको भन्दैँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेपछि उक्त स्टाटसलाई अहिलेसम्म बोलेका मध्य सबैभन्दा ठूलो झुठ भन्दैँ ट्रोल बनाईएको छ ।
पदमा रहेको राष्ट्रपतिले यति धेरै मत पहिलोपटक ल्याएको डोनाल्ड ट्रम्पले दावी गरेका हु्न् । आफूले ७१ मिलियन वैध मत ल्याएको र अमेरिकाको इतिहासमा पदमा रहेका राष्ट्रपतिले ल्याएको यो नै सबैभन्दा धेरै मत रहेको भन्दै ट्रम्पले ट्वीट गरेका छन् ।
मतगणनास्थलमा पर्यवेक्षकहरुलाई अनुमति नदिइएको दावी गर्दै ट्रम्पले आफूले चुनाव जीतेको बताएका छन् । आफ्ना पर्यवेक्षकहरुलाई मत गणना हेर्न नदिइएको र खराब कुरा भएको ट्रम्पको भनाई छ । यस्तो कहिलेपनि नभएको उनको भनाई छ । कहिले नै मतपत्र अनुरोध नगरेकाहरुलाई दशौं लाख मतपत्रहरु हुलाकबाट पठाइएको ट्रम्पको दावी छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएको घोषणा भएको झण्डै ५ घण्टापछि ट्रम्पले यस्तो ट्वीट गरेका हुन् । ट्रम्पको पहिलो ट्वीट ट्वीटरले विवादास्पद भन्दै फ्लाग गरेको छ ।
यसैबीच आज राती ८ बजे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले विशेष सम्बोधन गर्ने भएका छन् । बाइडेनलाई चर्चित रिपब्लिकनहरु मिट रोम्नी र जेब बुस लगायतले बधाई दिइसकेका छन् । त्यस्तै पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा लगायतले पनि बाइडेनलाई बधाई दिएका छन् ।
ट्रम्पले चुनाव हार्ने कल्पना समेत गरेका थिएनन् । तर हारे । कोभिड १९ को नियन्त्रणमा देखाएको उदासिनता उनको हारको मुख्य कारण बन्यो । उनको विभेदी, दम्भी, घमण्डी, रिसालु र उग्र स्वभाव हारका सहायक कारण थिए । यही स्वभावका कारण उनलाई मन नपराउने धेरै छन् । उनको व्यक्तीत्वको पुजारी पनि कम छैनन् । उनी सफल व्यावसायी हुन् । उनी अहिले दुनियाको सबैभन्दा धनाढ्यहरुको सूचीमा पर्छन् । हार सजिलो हुदैँन भन्ने उनको भनाई विश्वचर्चित छ । अन्ततः हारेका उनी अब के गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
ज्या*न गुमाउनु अघि विश्व प्रसिद्ध फेशन डिजाइनरले जीवनका बारेमा यसो भनेकी थिइन्
दाङमा ग्याँस सिलिण्डरका कारण ५ सय चल्ला म’रे ! घर, गोठमा क्षति, तीन जना घाइते